संसदमा गगन थापाको प्रश्न: तामाकोशी बन्ने पैसा कसले खायो ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद..
अश्लिल साइट छुट्याउने प्रविधि नै छैन : सेवा प्रदायक
काठमाडौं। सरकारले यौनजन्य अश्लिल सामाग्रीको सहज पहुँचमा रोक लगाउन भन्दै त्यस किसिमका वेबसाइटहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने सरकारले तोकेर दिएको साइट बाहेर अरु बन्द गर्न नसक्ने..
अमेरिकाले व्यापार युद्ध हार्ने: युरोपियन केन्द्रीय बैंक
फ्रान्कफर्ट । संयुक्तराज्य अमेरिकाले व्यापार युद्धलाई व्यापक बनाउँदै लगेमा एक वर्षभित्रै अमेरिकी आर्थिक कृयाकलापहरु दुई प्रतिशतभन्दा बढीले घट्ने युरोपेली केन्द्रीय बैंक ९इसीबी०का अनुसन्धाताहरुले बताएका छन् । इसीबीका अध्यक्ष मारिओ ड्रागी र..
नेपालको कसैसँग पनि शत्रुता छैन:प्रधानमन्त्री ओली
न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको कसैसँग पनि शत्रुता नभएको र सबैप्रति मित्रता भएकाले सबैको सहयोगबाट मुलुकलाई कम विकसित स्तरबाट विकसित बनाउन चाहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एशिया सोसाइटीले..
असोज १७ देखि अमेरिकी डिभी भिसा खुल्‍ने, आवेदन भर्दा नयाँ नियम
काठमाडौं । सन् २०२० को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको लागि आवेदन अक्टोबर ३, २०१८ बाट सुरु हुने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। दूतावासद्वारा बुधबार जारी वक्तव्यमा नोभेम्बर ६, २०१८ सम्म आवेदन..
नेपाल आइडललाई भोटिङ गर्न अब ‘रेस्पेक्ट एण्ड राइज’ एप
काठमाडौं । नेपाल आइडललाई भोटिङ गर्न अब ‘रेस्पेक्ट एण्ड राइज’ एप निर्माण गरिएको छ । रेस्पेक्ट इन्क नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको सोसियल नेटवर्किङ एप ‘रेस्पेक्ट एण्ड राइज’ बाट नेपालकै पहिलो सिङ्गिङ..
अमेरिकी संरक्षणवादले विश्व आर्थिक प्रणालीलाई अवमुल्यन गर्यो: चीन
बेइजिङ। अमेरिकी सरकारले व्यापार संरक्षणको कठोर उपाय गरेको र यसले विश्वको आर्थिक प्रणालीलाई नै अवमुल्यन गरेको चिनियाँ विदेश परिषद्को सूचना कार्यालयले सोमबार जारी स्वेतपत्रमा बताइएको छ। चीन–अमेरिका व्यापार तनावबारे तथ्य र..
भारतलाई अमेरिकाको धम्कीः नसच्चिए कारवाही हुनसक्छ
एजेन्सी । विश्वशक्तिको दौडमा रहेको चीनसँग ब्यापारिक तनाव झेलिरहेको अमेरिका चीनकै छिमेकी मुलुक भारतसँग आमने-सामने भएको छ । पछिल्लो समय भारतका व्यापारिक मामिलामाथि चासो बढाउँदै लगेको अमेरिकाले रसियासँगको सम्बन्धलाई लिएर धम्की..
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको घोषणा, भारतमा “मोदीकेयर” आरम्भ
काठमाडौं । भारतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आइतबार घोषणा गरिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो कार्यक्रमले ५० करोड गरिब मानिसलाई सेवा दिने बताएका छन् । “मोदीकेयर”..
दसैंको मुखैमा आजैदेखि सरकारले गाडी भाडा १० प्रतिशत बढायो
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको भाडा आजदेखि १० प्रतिशत बढाइएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अग्रिम टिकट बुकिङका लागि भाडा बढाउनुपर्ने सर्त अघि सारेपछि सरकारले १० प्रतिशत गाडी भाडा..
अमेरिका । अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यमा बिहीबार एक नेपालीको गोली हानी हत्या भएको छ । गोली प्रहारबाट अर्का एक नेपाली घाइते छन् । एक युवतीले अन्धाधुन्ध चलाएको गोली लागेर पर्वतकी ४१ वर्षीया..
मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका तीन डीआईजीको एआईजीमा बढुवा
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका तीन डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार राति अबेर सम्पन्न बैठकले बढुवा सिफारिस समितिको सिफारिसअनुसार पुस्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई एआईजी बढुवा..
सरकारले पोर्न साइटमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने
काठमाडौं । सरकारले यौनजन्य अश्लील सामग्रीको पहुँच बन्द गर्ने भएको छ। इन्टरनेट र अश्लील सामग्रीले बलात्कार र हिंसाका घटना बढेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी..
नेकपाको तल्ला कमिटीको एकीकरण सुरु, प्रदेश कमिटीको नेतृत्व टुंगो लाग्यो
काठमाडौँ । नेकपाले प्रदेशको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव गरी मुख्य चारवटा पदमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पक्षबाट २ /२ जनाको भागबन्डा गरी शुक्रबार जिम्मेवारी तोकेको छ । नेकपा सचिवालयको..
जर्मनीद्वारा साढे सात अर्ब अनुदान सहायता
काठमाडौँ । जर्मनीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु सात अर्ब ५० करोड बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार जर्मनीको बर्लिनमा सम्पन्न नेपाल–जर्मनी विकास सहायतासम्बन्धी वार्तामा..
काठमाडौं । राजधानीको बालाजु सवस्टेशनबाट विद्युत्त आपूर्ति हुँदै आएका क्षेत्रहरुमा आज केही घण्टा लोडसेडिङ हुने भएको छ । सडक विस्तारलगायतका कार्यमा सहजीकरण गर्न विद्युत्त आपूर्ति कटौती गर्दै आएको प्राधिकरणले वनस्थली चोकदेखि..
चीनले पनि लगायो ६० अर्ब डलर बराबरका सामानमा अमेरिकीका विरुद्ध ‘काउन्टर’ शुल्क
बेइजिङ । अमेरिकाले करिब २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गरेको बदलास्वरूप चीनल पनि मंगलबार ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सामानमा आगामी हप्तादेखि कर बढाउने घोषणा गरेको..
अर्थमन्त्रीले भने– तरलतामा सुधार देखियो,सेयर बजार बढ्यो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा अर्थतन्त्रको आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा..
नबिल बैँकका सिइओ अनिल शाह एन्फाको सल्लाहकारमा नियुक्त
काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले बैंकर अनिल केशरी शाहलाई एन्फाको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा एन्फाको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि नै एन्फाले बैंकर शाहलाई कर्पोरेट सल्लाहकारको रुपमा..
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पर्सनालिटी अफ दी इयर’ अवार्डबाट सम्मान गरिने भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याई उज्यालो नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण काम गरेको..
मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा अर्थमन्त्रीले भने एक रुपैयाँ पनि कर नछोड्नु
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयको केही क्षेत्राधिकारसहित १, २ र ३ क्षेत्रीय कर कार्यालयहरु गाभिएर मध्यमस्तरीय कर कार्यालय संचालनमा आएको छ। सो कार्यालयलको आजै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले औपचारिक उद्घाटन..
सिटी एक्स्प्रेसको ९० दिने “लखपति एक्स्प्रेस” योजना
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले चाड दशैँ, तिहार र छठ् लाइलक्षित गर्दै आफ्ना उपभोक्ताहरु संग पर्वको खुशी साट्न लगातार ९० दिन सम्मचल्ने “लखपति एक्स्प्रेस” उपहार योजना घोषणा गरेको छ..
भारतको भूकम्पले पूर्वी नेपालमा धक्का
काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । यो भूकम्प नेपालमा नभइ भारतमा गएको हो । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले भारतमा गएको भूकम्पका कारण पूर्वी नेपालका जिल्लामा पनि धक्का..
एआईजी बढुवाका लागि ३ जना सिफारिस, पुष्कर कार्की पहिलो नम्बरमा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालय बढुवा समितिको सचिवालयले नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदका लागि तीन जनालाई बढुवा सिफारिस गरेको छ । डीआईजीत्रय पुष्कर कार्की, ठुले राई..
रेनेसासले ७ अर्ब डलरमा कम्पनी खरिद गर्ने, एक्वायरको निर्णयले कम्पनीको शेयर ५.५४%ले बढ्यो
टोकियो। जापानको सेमिकन्डक्टर कम्पनी रेनेसासले मंगलबार ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलरमा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित आइडीटी सेमिकन्डक्टर निर्माता कम्पनी खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त समाचार प्रकाशनमा आएलगत्तै रेनेसासको शेयरमा ५.५४..
अमेरिकालार्इ कमजोर बनाउन रुस र चीनबीच गठबन्धन, दुर्इ देशको व्यापारमा डलर कारोबार प्रतिवन्ध
भ्लादिभोस्टोक। मस्को र बेइजिङले व्यापारमा आफ्नै राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग गर्ने रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मङ्गलबार बताए।रूसको पश्चिमसँगको सम्बन्धमा थप समस्या आइरहेका समय रूसी राष्ट्रपतिको यो भनाई आएको हो । रूसी तथा..
अमेरिकी करवृद्धिबाट जोगिन चिनीयाँ कम्पनीहरु विदेश पलायन
बेइजिङ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको करवृद्धिबाट जोगिन ठूलो संख्याका चिनीयाँ कम्पनीहरुले नयाँ तरिका अपनाउन थालेका छन् “चीनमा निर्मित” को साटो वस्तुका उत्पादनका लोगोहरुमा भियतनाम, सर्बिया र मेक्सिकोको नाम छाप्न..
तीजका दिन काठमाडौँमा यी ठाउँमा हुँदैछन् सवारी साधन प्रवेश निषेध, यस्तो छ रुट
काठमाडौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले तीजका दिन पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर भएर चल्ने सवारी साधनका लागि नयाँ रुट व्यवस्थापन गरेको छ। महाशाखाले बागमती करिडोरका केही रुटमा पूर्ण रूपमा यातायात प्रतिबन्ध लगाएको..
काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन
काठमाडौं । काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। बिहीवारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको सम्मेलन शुक्रवार काठमाडौं..
बाढिले ६ विद्युत आयोजनाको ५० मेगावाटभन्दा वढि विद्युत आपुर्ति रोकियो
म्याग्दी। बाढीले बाँधमा क्षति पुर्याएपछि म्याग्दी र मुस्ताङका दुई जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन्। बाढीले असर पुर्याउँदा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–१ टुकुचेस्थित १३.६ मेगावाट क्षमताको थापाखोला जलविद्युत् आयोजना र म्याग्दीको अन्नपूर्ण..
Results 1994: You are at page 26 of 67